Indlu esemaphandleni Iflethi okanye indlu ekwicomplex Ipuli Yokuqubha Nendawo Yokubraya - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni Iflethi okanye indlu ekwicomplex Ipuli Yokuqubha Nendawo Yokubraya
Parque dos Cafezais 4, São Paulo, Brazil
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRegina
Indlu esemaphandleni etofotofo enepuli nendawo yokubasa kwimizuzu eyi-50 ukusuka eSão Paulo ekwiikhilomitha eziyi-59 ukusuka eBandeirantes. Inendawo yokuhlala yabantu abayi-9, amagumbi okulala ayi-5, anamagumbi okulala ayi-3, ipuli yokuqubha, indawo enendawo yokoja, ibhalkhoni enkulu eneesofa neebhedi ekuthiwa zii-hammock, enegadi nemithi entle yesundu. I-intanethi 200wagen kunye ne-Smart TV kumagumbi okulala nakwigumbi lokuhlala. Ikhitshi elinesitovu, ioveni yombane, i-microwave, amagumbi okuhlambela ayi-4 apheleleyo. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kumagumbi okulala ayi-3 nakwigumbi lokuhlala. Ikwindawo ethe cwaka ngaphakathi kwindawo ebiyelweyo.
Iindawo zamkelekile kwaye zinamagumbi aliqela, kumnandi kakhulu kubantu abafuna uxolo nokuzola ukuze bonwabele izihlandlo ezikhethekileyo nentsapho yabo. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ijikelezwe ziindawo eziluhlaza ezivumela ukuhamba kwiindlela zayo ezipholileyo. Ukhuseleko, iminyango yeeyure eziyi-24 kunye neendawo zokubambelela ezijongwe ziikhamera. Ehlotyeni unepuli kwaye ebusika unokonwabela ubusuku phambi kwendawo yokubasa umlilo.
43" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Roku
I-Parque dos Cafezais yindawo eneeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinamavili, ibe yiCafezal IV enomtsalane yokudibana kwendalo kwaye ngexesha elinye ibe ziikhilomitha eziyi-4 kuphela. embindini wesixeko saseItupeva.
Ebudeni bokuhlala kwam, iindwendwe zam zinokuthembela kum ukuze zincede okanye ndizithembe ngomntu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Parque dos Cafezais 4